I-1 BR engavamile - imizuzu engama-20 ukuya e-Times Square!
Leli fulethi liyizinyathelo nje ukusuka kwezokuthutha ukuya e-NYC. Emizuzwini engama-20 uzozithola uku-Times Square! Kukhona igumbi lokuhlala, ikamelo lokulala eli-1, ikhishi / indawo yokudlela nendawo yokugezela. Indawo yokupaka yangasese iyatholakala uma uyicela!
Leli fulethi elisanda kulungiswa kabusha eli-1 Bedroom litholakala ngqo phambi kwezinto zokuhamba eziya e-NYC's Times Square. Jabulela izingubo zokulala zikanokusho, i-wifi, i-kitchenware, igumbi elondolo esakhiweni, indawo yokupaka yangasese nakho konke okunye okudingayo ekhaya lakho kude nasekhaya. Yindawo ekahle yokuphumula ngemva kosuku lokubuka indawo nokuthenga.
Asingabazi ukuthi uzolithola leli fulethi ESPOTLESS. Siyaziqhenya ngokuhlanzeka nokuhleleka kakhulu. Wonke amalineni, amathawula kanye nomatilasi kusha sha futhi ngezingubo zokulala zikanokusho ezengeziwe, uzokwazi ukuthokomala kusofa ngengilazi yewayini ukuze uphumule eholidini lakho! Ikhishi lethu ligcwele amathuluzi okupheka aqinisekile ukuthi azogqugquzela noma ubani ukuthi enze ukudla okumnandi.
Sinendawo yokupaka yangasese, esesayithi etholakalayo ngenkokhelo eyengeziwe engu-$15 ngosuku. Vele usazise uma udinga isikhala futhi sizoxhumanisa okunye.
Eminye imininingwane eyengeziwe mayelana nesikhala:
* I-HDTV ye-Flatscreen ene-Roku ukusakaza kusuka kunoma iyiphi inkundla
* Ikhishi Lesimanje Elinezinto Zensimbi Engagqwali
* Ikhishi, amabhodwe, amapani
* I-Wifi ye-inthanethi esheshayo
* 1 Indawo Yokupaka ukuze uthole imali eyengeziwe
*Igumbi lokugezela eli-1 eligcwele
* 1 Umbhede Wendlovukazi Owu-1
* I-Queen Sofa Bed
* Amalayini kanokusho, Izingubo zokulala, amathawula, imicamelo
* I-Central Heat & Unit Air Conditioning
* Iziqondiso Zokuhamba ze-NYC, Amamephu, namakhuphoni
Ngemizuzu embalwa, ungafika e-Times Square futhi ukusuka lapho ungahamba ngezinyawo noma uthathe indlela ehamba ngaphansi uye ezindaweni ezihamba phambili e-NYC. Uzofika eMidtown Manhattan ngokushesha kunokusuka ezindaweni eziningi ezihlanganisa iBrooklyn, Queens noma iDowntown Manhattan.
Sibheke ngabomvu ukukubamba :)
Sikude nezinyathelo zokuthutha eziqondile eziya e-NYC. Ngebanga elihamba ngezinyawo uzothola izindawo zokudlela, izitolo zekhofi, izitolo zewayini nezitolo ezinkulu. Sisebenze kanzima ukuhlanganisa i-Welcome Binder ezoba sefulethini ukuze sikusize wenze ukuhlala kwakho kukhululeke ngangokunokwenzeka. Ku-binder uzothola amathani olwazi ngazo zonke izinto ezinhle eNorth Bergen & NYC engazihlinzeka.
Nakuba ngokuvamile singaziboni izihambeli zethu mathupha, sihlala lapha esakhiweni futhi sitholakala phakathi nesikhathi esigcwele sokuhlala kwakho. Uma noma yimiphi imibuzo noma ukukhathazeka kuphakama, indlela engcono kakhulu yokuxhumana nathi ngohlelo lokusebenza/isayithi le-Airbnb. Sitholakala ngombhalo noma ngocingo ezimeni eziphuthumayo.
Nakuba ngokuvamile singaziboni izihambeli zethu mathupha, sihlala lapha esakhiweni futhi sitholakala phakathi nesikhathi esigcwele sokuhlala kwakho. Uma noma yimiphi imibuzo noma u…